चुनावमा जानु नै बुद्धिमानी
वि.सं. ०६३/०६४ सालदेखि मधेश लगातार अशान्त छ । ०६३/०६४ मा भएको पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि भनेर मधेशवादी दलले विभिन्न गठबन्धन बनाएर दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिरहे । संविधानसभाको दोस्रो चुनाव मिति तोक्दा पनि मधेश स्थिर थिएन । आन्दोलनकै क्रममा मधेशमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भएको थियो ।
त्यो चुनावलगत्तै कहिले माओवादी केन्द्रसँग त कहिले मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादीसँग त कहिले कोसँग गठबन्धन बनाएर मधेशी मोर्चा निरन्तर आन्दोलनमा रह्यो । त्यतिबेला मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर बनाएको ३० दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले पनि हावा खायो, प्रचण्डले गठबन्धन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सम्झौता गर्नुभएपछि । नेपालको इतिहासमा त्यो दिन राजनीतिकमा ‘ब्रेक थु्र’ नै भएको थियो ।
अब संविधान निर्माण हुने भयो भनी सारा नेपाली हर्षित भएका थिए तर ‘मधेश’ दुःखी थियो किनभने यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा भइरहेको थिएन र प्रचण्डले पनि साथ छाडेर हिँड्नुभएको थिए । यसपछि मोर्चाले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई झन् कडा बनाउने निर्णय ग¥यो र अन्ततः भदौ १ गतेदेखि मधेशलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । एकातिर संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो भने अर्कोतिर मधेशमा आन्दोलन चर्कियो । मोर्चाले राखेको मागको बेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते तीन ठूला दलको अगुवाइमा संविधानसभाले नेपालको नयाँ सविधान जारी ग¥यो । त्यतिबेलासम्म मधेश आन्दोलनमा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो ।
नयाँ सविधान जारी भएपछि अब नेपालमा अमनचयन होला, आर्थिक समृद्धिका ढोका खुल्लान् भनेर त्यो दिन काठमाडौँलगायत धेरै जिल्लामा दीपावली गरियो तर मधेशी मोर्चाले मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’ ग¥यो । नेपाली जनताले नाकाबन्दीको मारसम्म सहनुप¥यो । सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ आसोज २४ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । मोर्चाको आन्दोलन झन् चर्को भयो । एमाले नेतृत्वको सरकार र मधेशी मोर्चाबीच ३६ पटकसम्म वार्ता भयो तर कुरा मिलेन । वार्ता भारतको दिल्लीसम्म पनि पुग्यो तर सहमति हुन सकेन ।
संविधान संशोधनको माग राख्दै जारी आन्दोलन त्यतिबेला शान्त भयो, जुनबेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली भारतको भ्रमणमा निस्किनुभयो । २०७२ फागुन ७ गते भएको भारत भ्रमणको मौकामा मोर्चाले आन्दोलन कार्यक्रम पनि फिर्ता लियो । त्यो बेला मधेशी मोर्चाले भारतको इशारामा आन्दोलन फिर्ता लिएको आलोचना पनि भएको थियो तर आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम जारी नै थियो । २०७३ साउन १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो पनि मधेशी मोर्चाको सहयोगमा । तीन बुँदे सम्झौता गरी मोर्चाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि आन्दोलन फिर्ता लिएन । सरकारलाई समर्थन गरे पनि मोर्चा संसद्मा प्रतिपक्षको बेञ्चमा नै बस्यो । तीन बुँदे सम्झौताको पहिलो नम्बर बुँदामा सविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख थियो । सोही सम्झौताअनुसार ढिलै भए पनि २०७३ मङ्सिर १४ गते सरकारले संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरायो । त्यसमा पनि मोर्चाको विरोध रह्यो । पछि, परिमार्जनसहित सोही विधेयकलाई पारित गराए आफूहरूले मान्ने भनी मोर्चाले निर्णय ग¥यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन भन्दै पारित हुन नदिने निर्णय ग¥यो । एमालेको यस्तो निर्णयले मोर्चा झन् उत्तेजित भयो र एमाले पार्टीविरुद्ध आन्दोलन गर्र्न थाल्यो । ‘मधेश’ मा एमालेलाई निषेध गर्नेदेखि लिएर त्यसको कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको कार्य मोर्चाका नेताहरूबाट भयो । सरकार संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने पक्षमा थियो तर एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने अडान लिएपछि संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो । चुनावको मिति तत्कालै घोषणा गरिएन भने माघ ७ गतेभित्र सबै तहका चुनाव सम्पन्न गराउन सकिँदैन भने आपत् सरकारलाई प¥यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन ९ गते वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो । त्यसको विरुद्धमा मोर्चाले मधेश बन्दको घोषणा गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।
चुनावको मिति घोषणाले गर्दा देशभर उत्साह थपिए पनि मोर्चाले विरोध गर्न थाल्यो । संविधान संशोधन नगरिकन चुनावको मिति घोषणा भएकाले त्यसलाई कदापि स्वीकार नगर्ने भन्दै मोर्चा अहिले पनि आन्दोलनमै छ । फागुन २३ गते एमालेले सप्तरीमा गरेको जनसभाको विरोध गर्दा भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको निधन भयो । त्यही घटनाको आडमा मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो । मोर्चाले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा ६५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु प¥यो तर पनि सरकारले माग पूरा गरेन । यसले गर्दा मधेशवादीमा आक्रोश बढेको छ तर के यो निरन्तर आन्दोलनले मात्रै मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त ? मधेशमा लगातार १० वर्षदेखि आन्दोलन भइरहेको छ । त्यसले मधेशलाई कति नोक्सान भएको छ त्यसको हिसाबकिताब मधेशवादी दलले गरेका छन् ? यो दश वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर कहाँ गयो ? कृषि, आर्थिक वृद्धिको अवस्था कहाँ पुग्यो ? यसको हिसाबकिताब मोर्चाले गरेको छैन ।
२० वर्षपछि आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले समाजमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । २० वर्षदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको स्थानीय निकाय पुनः बन्ने छ तर मधेशी मोर्चाको यो आन्दोलनले गर्दा चुनाव होला कि नहोला भनी तराई–मधेशमा अन्योल देखिएको छ । अब चुनाव भएन भने फेरि कहिले हुने हो निश्चित छैन । त्यसैले मधेशी मोर्चाको बुद्धिमानी आफ्नो माग यथावत् राखेर पनि चुनावमा जानु हो । जनतामा आफ्नो पकड बनाउने, स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधि जिताएर बलियो हुने काम गर्नुपर्छ । चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा दिन सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पाटो नै चुनाव हो । जनताले चुनावमार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । त्यो अधिकारबाट पनि वञ्चित राखियो भने जनता निरास हुन्छ र त्यसको मुडमा परिवर्तन हुन सक्छ । त्यसैले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । सरकारसँग जे–जे कुरामा सहमति भइरहेको छ त्यसमा सहमति गरेर चुनावमा जाने र बाँकी विषयका लागि सङ्घर्षलाई जारी राख्ने विकल्प नै उत्तम विकल्प हो । स्थानीय चुनाव भयो भने ग्रामीण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने छ र आफ्नो माग र अधिकारलाई नयाँ शिरा र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने छ ।